Izindaba - Isiteshi sokushaja amaselula iVolkswagen sizoqala ukubonakala eGermany ngoMashi ozayo
Isiteshi sokushaja amaselula iVolkswagen sizoqala ukubonakala eGermany ngoMashi ozayo
Uphiko lweVolkswagen Group selusungule futhi lwakhipha isiteshi sokushaja esingumahamba nendlwana sezimoto ezisebenza ngogesi, izikuta kagesi namabhayisikili kagesi, okuthiwa yisiteshi sokushaja eselula iVolkswagenpassat. Ukugubha iminyaka engu-80 yasungulwa, iVolkswagen izofaka iziteshi eziyi-12 zokushaja amaselula eWolfsburg, eJalimane. Isiteshi sokushaja seselula iVolkswagen Passat empeleni sinikeza amandla angama-200 kWh, alingana namandla e-e-Golf enamabhethri angu-5.6.
Amandla esiteshi sokushaja eselula avela kumandla “aluhlaza”: amandla elanga nomoya. Njengephrojekthi yomshayeli yokushaja izimoto zikagesi, izakhamuzi zaseWolfsburg zingayisebenzisa mahhala. Ibhethri lesiteshi sokushaja eselula lingasebenza ngokuzimela kunamandla amakhulu futhi lingashajwa noma lishintshwe.
Isiteshi sokushaja esingumahamba nendlwana sizohanjiswa ezindaweni ezahlukahlukene ngokwezidingo zamanje zedolobha. Isibonelo, ezindaweni lapho kubanjelwa khona imicimbi yomphakathi, imidlalo yebhola, noma amakhonsathi, iziteshi ezinjalo zokushaja zingakhokhisa ngasikhathi sinye izimoto ezine ezihlukile, njengamabhayisikili kagesi nezimoto ezisebenza ngogesi. Ngamafuphi, iVolkswagen ihlela ukutshala imali eyizigidi ezingama-10 edolobheni laseWolfsburg, eGermany ukwakha ingqalasizinda yokushaja. Esokuqala kulezi ziteshi eziyi-12 zokushaja sizosungulwa ngoMashi 2019 futhi sizophinde sifakwe kunethiwekhi yokuthunyelwa kweziteshi zokushaja ezingamaselula.
UKlaus Mors, oyiMeya yaseWolfsburg, eJalimane, wemukele uhlelo lokusungula iziteshi eziyi-12 zokushaja omakhalekhukhwini kuleli dolobha wathi: “IVolkswagen neWolfsburg bazothuthukisa uhambo lokuhamba ngomakhalekhukhwini esikhathini esizayo. Indlunkulu yaleli qembu, iWolfsburg, ilabhorethri yokuqala yokuhlola imikhiqizo emisha yakwaVolkswagen ngaphambi kokungena emhlabeni wangempela. Isiteshi sokushaja siyisinyathelo esibalulekile ekwakheni inethiwekhi yokushaja esebenza kahle ezokhuthaza abantu ukuthi bakhethe izimoto zikagesi. Imodi yokuhamba ephathekayo kagesi izothuthuka. Izinga lomoya wasemadolobheni lenza idolobha libe nokuthula. ”